Etu esi enweta WordPress na Mfe Nzọụkwụ 10 | Martech Zone
Etu esi echedo WordPress na 10 Easy Steps
Mọnde, Febụwarị 10, 2020 Tuesday, February 11, 2020 Akshat Choudhary
You mara na ihe karịrị 90,000 hacks na-nwara ọ bụla nkeji na WordPress saịtị ụwa? Ọfọn, ọ bụrụ na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ a kwadoro WordPress, ọnụọgụ ahụ kwesịrị ichegbu onwe gị. O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa pere mpe. Ndị na-agba ọsọ anaghị akpa ókè na-adabere na nha ma ọ bụ mkpa weebụsaịtị. Ha na-achọ naanị ọghọm ọ bụla enwere ike iji ya mee ihe.
Nwere ike ịnọ na-eche - gịnị kpatara ndị na-agba ọsọ ji enyocha saịtị WordPress na nke mbụ? Olee uru ha na-erite ma ha tinye aka n'omume ọjọọ ndị ahụ?
Ka anyị chọpụta.
Gịnị mere ndị na-agba ọsọ ji ezube saịtị WordPress?
Nwee ya na WordPress ma ọ bụ n'elu ikpo okwu ọ bụla; ọ dịghị website bụ nchebe n'aka hackers. Bụ ihe kachasị ewu ewu CMS n'elu ikpo okwu, Saịtị WordPress bụ ọkacha mmasị nke ndị na-agba ọsọ. Nke a bụ ihe ha na-eme:
Chọpụta ihe ọhụrụ nchekwa adịghị ike, nke dịtụ mfe ịchọta na saịtị ndị dị ntakịrị. Ozugbo hacker na-amụta banyere adịghị ike ma ọ bụ adịghị ike ọ bụla, ha nwere ike iji ihe ọmụma ha kwụsị weebụsaịtị buru ibu ma kpatara mmebi karịa.
Nyegharịa okporo ụzọ gị na-abata gaa na ebe nrụọrụ weebụ na-achọghị. Nke a bụ ihe kpatara ebumnuche maka ịchọta saịtị dị elu, n'ihi nke ezigbo weebụsaịtị nwere ike tufuo ndị ọrụ ya niile na weebụsaịtị ọzọ na-enyo enyo.
Nweta ego ma ọ bụ meputa ego site n'inweta ahia ahia na ezigbo saịtị ma obu site na iche iche nke malware dika ransomware ma obu crypto mining.
Nweta ohere inweta ọgụgụ isi ma ọ bụ data nzuzo dị ka data ndị ahịa, data azụmaahịa nkeonwe, ma ọ bụ ndekọ ndekọ ego nke ụlọ ọrụ ahụ. Ndị na-agba ọsọ nwere ike ịga ere data ezuru ezu maka ego ma ọ bụ jiri ya maka asọmpi asọmpi na-adịghị mma ọ bụla.
Ugbu a anyị matara etu ndị omekome nwere ike isi rite uru site na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ kwenye, ka anyị gazie tụlee ụzọ iri a nwalere. ịchekwa saịtị WordPress.
10 venzọ a gosipụtara iji chebe saịtị gị
Luckily maka WordPress, e nwere ụzọ dị iche iche ị nwere ike iji bulie nchekwa weebụsaịtị. Akụkụ kachasị mma banyere usoro ndị a bụ na ọtụtụ n'ime ha abụghị ihe mgbagwoju anya ma nwee ike mejuputa ya site na onye ọrụ WordPress ọ bụla. Yabụ, ka anyị bido.
Kwụpụ 1: Melite WordPress gị na Plugins na Themes
Ihe odide ochie nke ochie, yana plugins na isiokwu ochie bụ otu n'ime ihe ndị kpatara WordPress saịtị na-abanye. Ndị na-agba ọsọ na-erigbu chinchi metụtara nchekwa na WordPress gara aga na ngwa mgbakwunye / isiokwu ka na-arụ ọrụ na ọtụtụ saịtị WordPress.
Ihe nche gị kachasị mma maka iyi egwu a bụ imelite ụdị isi WordPress gị yana mmelite na nsụgharị ndị ọhụrụ nke plugins / gburugburu arụnyere. Iji mee nke a, ma mee ka “Nchekwa onwe” rụọ ọrụ na akaụntụ nchịkwa WordPress gị ma ọ bụ were ngwaahịa niile plugins / gburugburu gị arụnyere ugbu a.
Nzọụkwụ 2: Jiri Firewall Protection
Ndị na-agba ọsọ na-etinye bots na-akpaghị aka ma ọ bụ arịrịọ IP iji nweta saịtị WordPress. Ọ bụrụ na ha nwere ihe ịga nke ọma site na usoro a, ndị na-agba ọsọ nwere ike imebi mbibi kachasị na saịtị ọ bụla. A na-ewu mgbidi firewasị iji mata arịrịọ IP site na adreesị IP enyo ma gbochie arịrịọ ndị dị otú ahụ tupu ha abanye na sava weebụ.
Firewall. Echiche nchedo ozi. Echiche nke teknụzụ dịpụrụ adịpụ na ọcha
Nwere ike mejuputa nchebe firewall maka ebe nrụọrụ weebụ gị site na ịhọrọ:
N'ime firewalls - site na ụlọ ọrụ nnabata web gị
Igwe ọkụ na-eweta igwe ojii - kwadoro na nyiwe igwe ojii dị na mpụga
Ngwunye ọkụ na-adabere na ngwa mgbakwunye - enwere ike itinye ya na saịtị WordPress gị
Kwụpụ 3: Nyochaa ma wepu Malware ọ bụla
Ndị na-agba ọsọ na-abịa na iche iche nke malware iji mebie saịtị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ malware nwere ike ịkpata mmebi dị ukwuu ma mebie ebe nrụọrụ weebụ gị ozugbo, ndị ọzọ dị mgbagwoju anya ma sie ike ịchọpụta ọbụna ụbọchị ma ọ bụ izu.
Nchedo kachasị mma megide malware bụ iji nyochaa weebụsaịtị gị zuru oke maka ọrịa ọ bụla. Top WordPress nche plugins dị ka MalCare na WordFence dị mma maka nchọpụta oge na mkpocha nke malware. Ngwa nchekwa ndị a dị mfe iji wụnye ma mepụta ọbụna maka ndị ọrụ na-abụghị teknụzụ.
4kwụ na XNUMXkwụ XNUMX: Jiri a mma na ntụkwasị obi Web Host
Na mgbakwunye na nke ochie WordPress na nsụgharị na plugins / gburugburu, web hosting setup nwere ihe dị mkpa na nchekwa weebụsaịtị gị. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-agba ọsọ na-echekarị weebụsaịtị na ebe nrụọrụ weebụ na-ekerịta nke na-ekerịta otu sava ahụ n'etiti ọtụtụ weebụsaịtị. Ọ bụ ezie na nnabata nnabata dị ọnụ ahịa, ndị na-agba ọsọ nwere ike ibute otu weebụsaịtị weghaara wee gbasaa ọrịa ahụ na weebụsaịtị ndị ọzọ niile.
Benọ n'akụkụ nchebe, họrọ maka ntanetị weebụ na atụmatụ nchebe. Zere ndị ọbịa na - ekerịta, na, kama, gaa maka Bochum Bochum dabere na VPS
Nzọụkwụ 5: Were Ndabere zuru ezu nke saịtị WordPress gị
Ndabere weebụsaịtị nwere ike ịbụ onye na-azọpụta ndụ ma ọ bụrụ na ihe ejiri weebụsaịtị gị gaa. WordPress backups na-echekwa otu ebe nrụọrụ weebụ gị na faịlụ nchekwa data na ebe dị mma. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ịga nke ọma mbanye anataghị ikike, ị nwere ike mfe weghachi nkwado ndabere na mpaghara faịlụ gị website na normalize ya arụmọrụ.
Enwere ike ịrụ ọrụ nkwado ndabere WordPress na ụzọ dị iche iche, mana usoro kachasị mma maka ndị na-abụghị ndị ọrụ teknụzụ bụ site na nkwado plugins dị ka BlogVault ma ọ bụ BackupBuddy. Ọ dị mfe ịwụnye ma jiri, plugins ndabere ndị a nwere ike ịmepụta ihe ndị metụtara ndabere ka ị nwee ike ilekwasị anya na ọrụ gị kwa ụbọchị.
Nzọụkwụ 6: Chebe Nbanye peeji nke WordPress gị
N'etiti peeji nke ebe nrụọrụ weebụ kachasị emetụta nke ndị na-agba ọsọ, saịtị nbanye gị nke WordPress nwere ike inye gị ohere dị mfe na akaụntụ akaụntụ gị kachasị. N'iji mwakpo ike dị egwu, ndị na-agba ọsọ na-etinye bots na-akpaghị aka nke na-anwale ugboro ugboro ịnweta akaụntụ WordPress "ha" site na ibe nbanye.
Enwere ọtụtụ ụzọ ichebe ibe nbanye gị. Iji maa atụ, ị nwere ike zoo ma ọ bụ gbanwee ndabere abanye peeji URL gị, nke bụkarị www.mysite.com/wp-admin.
Pụrụ iche WordPress Nbanye peeji plugins dị ka “Okwu My Nbanye” -enyere gị aka zoo (ma ọ bụ gbanwee) nbanye gị peeji nke dị mfe.
Kwụpụ 7: Wepu ngwa mgbakwunye ọ bụla anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-adịghị arụ ọrụ
Dịka e kwuru na mbụ, plugins / themes nwere ike inye ụzọ dị mfe maka ndị na-agba ọsọ iji mepụta mbibi na saịtị WordPress gị. Nke a bụkwa eziokwu maka plugins na gburugburu na-enweghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-adịghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị wụnyela ọtụtụ n'ime ndị a na saịtị gị ma anaghịzi eji ha, ọ ga-adị mma iwepu ha ma ọ bụ jiri plugins / gburugburu arụ ọrụ dochie ha.
Kedu ka ị si eme nke a? Banye na akaụntụ WordPress gị dị ka admin onye ọrụ ma lelee ndepụta nke plugins / gburugburu arụnyere ugbu a. Hichapụ ngwa mgbakwunye / gburugburu niile anaghị arụ ọrụ.
Nzọụkwụ 8: Jiri Okwuntughe siri ike
Okwesighi ka nka puta ihe? N'agbanyeghị nke ahụ, anyị ka nwere okwuntughe na-adịghị ike dị ka password na 123456 eji. Ndị na-agba ọsọ na-ejikarị okwuntughe na-adịghị ike ime ihe agha na-adịghị mma.
Maka ndị ọrụ WordPress gị niile, jigide ụfọdụ ntuziaka. Jiri okwuntughe nke opekata mpe mkpụrụ edemede 8, yana nchikota nke nnukwu na nke obere, mkpụrụedemede, na mkpụrụedemede pụrụ iche. Mgbakwunye nchekwa ọzọ kwesịrị ịbụ ịgbanwe okwuntughe WordPress gị ọ dịkarịa ala otu ugboro kwa ọnwa atọ.
Kwụpụ 9: Nweta Asambodo SSL maka weebụsaịtị gị
Short for Secure Socket Layer, asambodo SSL bụ ihe zuru oke maka weebụsaịtị ọ bụla, gụnyere saịtị WordPress. Gịnị kpatara eji ele ya anya dị mma? Ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla SSL kwadoro SSL na-ezipụ ozi a na-ebufe n'etiti sava weebụ na ihe nchọgharị onye ọrụ. Nke a na - eme ka o siere ndị na - agba ọsọ ike ịbanye na izu data nzuzo a. Kedu ihe ọzọ? Ebe nrụọrụ weebụ a na-akwado Google ma nata a ọkwa Google dị elu.
Adreesị ịntanetị echedoro na-egosi na ihuenyo lcd.
Nwere ike ịnweta asambodo SSL site na onye na-eweta websaịtị na-akwado saịtị gị. Ọzọ, ịnwere ike ịwụnye ngwaọrụ dịka Ka anyị Encrypt na weebụsaịtị gị maka asambodo SSL.
Nzọụkwụ 10: Jiri WordPress Weebụ Hardening
Ihe ikpeazu bu idozi usoro obi ojoo nke WordPress. WordPress weebụsaịtị hardening mejupụtara ọtụtụ usoro gụnyere:
Gbanyụọ njirimara na-edezi faịlụ iji gbochie ntinye nke koodu obi na faịlụ WordPress gị dị mkpa
Gbanyụọ ogbugbu faịlụ PHP nke na-egbochi ndị na-agba ọsọ imebi faịlụ PHP nwere koodu obi ọ bụla
Izoputa ụdị WordPress nke na-egbochi ndị na-agba ọsọ ịchọta ụdị mbipute WordPress gị na ịchọ nsogbu ọ bụla
Izo faịlụ wp-config.php na .htaccess nke ndị na-agba ọsọ na-ejikarị emebi saịtị WordPress gị
Ọ dịghị WordPress saịtị, nnukwu ma ọ bụ obere, bụ kpamkpam nchebe n'aka hackers na malware. Agbanyeghị, ị nwere ike imeziwanye nchedo gị site na ịgbaso nke ọ bụla n'ime usoro iri ndị edepụtara n'isiokwu a. Nzọụkwụ ndị a dị mfe iji rụọ ọrụ ma achọghị nzụlite ọ bụla dị elu.
Iji mee ka ihe dịkwuo mfe, ọtụtụ ngwa mgbakwunye nchekwa na-etinye ọtụtụ atụmatụ ndị a, dị ka nchekwa nchekwa firewall, nyocha nyocha, iwepụ malware, yana ịgbakọ weebụsaịtị na ngwaahịa ha. Anyị na-akwadoro ime ka nchebe weebụsaịtị bụrụ akụkụ dị mkpa nke gị ndenye ndenye nlekọta weebụ.
Ka anyị mara ihe ị na-eche nke ndepụta a. Anyị enwefuola usoro nchebe ọ bụla dị oke mkpa nke dị oke mkpa? Mee ka anyi mara n’okwu gi.
Tags: ndabereblogvaultnchekwa firewallmbanye anataghị ikike wordpressesi kwusi WordPressesi chebe wordpresshtaccesshttpsadịghị mmamalwaresecuritynchekwa adịghị ikeSSLweb host
Akshat Choudhary Monday, February 10, 2020 Tuesday, February 11, 2020
Akshat Choudhary ekwenyewo mgbe niile na ya nwere ike ịkụziri onwe ya ihe. Kemgbe ịmalite BlogVault, Akshat agbanweela akụkụ ya-oru ngo n'ime a bara uru ịmalite na-amụba nke ọhụrụ dị elu na Indian mmalite ohere. N'ịbụ onye so na obodo WordPress ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri, Akshat nwere mmasị ịghọta ebe ndị ọrụ na-agba mgba. Isi nkwenye nke Akshat n'azụ iwu ngwaahịa ọ bụla bụ ijide n'aka na onye ọrụ njedebe achọghị enyemaka na iji nyere ha aka n'ụzọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ha emee ya.
5 Video edezi Atụmatụ maka ahịa
Wzọ 5 iji mee ka usoro sie ike na-enweghị imebi ihe okike